Success Mobile: February 2015
Thai နိုင်ငံ အတွက်ထုတ်ထားသော iNFONE, F phone, ais Lava များနဲ့ မြန်မာစာ
KDA ထိုင်း-မြန်မာ အကြံပေးကုမ္ပဏီလီမီတက် နှင့် Global future life holding Co., Ltd တို့မှ consignment (အပ်ကုန်) စနစ်ဖြင့်ရောင်းချ ထားသော iNFONE
နှင့် F Phone များမှာ အများအားဖြင့် unicode စနစ် ပါပြီး ဖြစ်ပါတယ်၊ ထို့ အတူ AIS မှ ထုတ်ထားသော LAVA စီးရီး
များမှာလည်း Unicode စနစ် အပြီး ပါပြီး ဖြစ်ပါသည်၊ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ဇော်ဂျီ ပြန်ပြောင်းချင်ပါက၊ root လုပ်ပြီး ပြန်ပြောင်းရပါတယ်၊ root လုပ်ရ မခက်ခဲသော်လည်း၊ one click ဖြင့် ဇော်ဂျီ သွင်းသည့် apk များဖြင့် အဆင်မပြေပါ၊ ရှိရင်းစွဲ ယူနီကုဒ် စာလုံးများပါ ပျောက်သွားခြင်း၊ english စာများတွင် ? ? ? များ ဖြစ်သွားခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပါသည်။
ယူနီကုဒ် အသုံးပြု သူလိုသူများ အနေဖြင့် မည်သို့မျှ ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပဲ တိုက်ရိုက် အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ဇော်ဂျီ အသုံးပြုလိုသူ များ အနေဖြင့် ဇော်ဂျီ သို့ ပြန်ပြောင်းရန်လိုအပ်ပါတယ်၊ ထိုကဲ့သို့ ဇော်ဂျီ သို့ ပြန်ပြောင်းအသုံးပြု လိုသူများ အနေဖြင့် old method ဖြစ်သော replace font က အဆိုပါဖုန်းများအတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ၄င်း ဖုန်းများတွင် အသုံးပြုထားသော unicode font မှာ padauk.ttf ဖြစ်ပါတယ်၊ ထို့ကြောင့် ဇော်ဂျီ သုံးချင်သူများ အနေဖြင့် smart zawgyi ကို padauk.ttf ဟု rename လုပ်ပြီး font ချိန်း နိုင်ပါတယ်၊
အပြစ်များကတော့ ယခင် မြန်မာ UI စာလုံးပေါင်းများ လွဲကုန်ခြင်း၊ ယူနီကုဒ် site များတွင် ပေါက်ကရများပေါ်ကုန်ခြင်း ဖြစ်သွားပြီး
အကျိုး တရားကတော့ ဇော်ဂျီ (လက်ရှိတွင် အများဆုံးသုံးစွဲ နေဆဲဖြစ်သဖြင့်) site အတော်များများ အဆင်ပြေပြေ ကြည့်ရှု နိုင်ခြင်း
အဆိုး ဆုံး ဖြစ်ပါက ( Beginners များသာ) font change ရာတွင် permission မပြောင်းမိသဖြင့် Boot loop ပတ်ခြင်း (logo တွင် လည်နေခြင်း) တို့ပါဖြစ်နိုင်ပါသည်။
လုပ်နေကြသူများ အဖို့ တော့ အခက်အခဲ မရှိနိုင်ပါသဖြင့် အောက်က အဆင့်များကို ဖတ်ရန်မလိုအပ်ပါ၊
လိုအပ်သောဖိုင်များ ကို အောက်တွင်ဒေါင်းပါ
iNFONE နှင့် F phone များအတွက် root လုပ်ရန်အတွက် vroot (iroot) ကို ဒေါင်းပါ
Ais LAVA series များအတွက် Kingo root ကိုဒေါင်းပါ
Root လုပ်တာကိုတော့ အသေးစိတ် မရှင်းတော့ပါဘူး၊ phone ထဲမှာပဲ root လုပ်ချင်သူတွေကတော့ အောက်က download ပုံလေး နှိပ်ပြီး ဒေါင်းလို့ရတဲ့ အထဲက king root နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် rommaster (iroot apk) နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်လို့ရပါတယ်၊
root လုပ်ပြီးပါက root explore ကို သွင်းပါ၊
ဒေါင်းထားတဲ့ file ကို zip ဖြည်ပြီး ရလာတဲ့ folder ကို sd ကဒ်ထဲ ထည့်ထားပါ
ပြီးရင် root explore ကို ဖွင့်ပါ (အနီ ဝိုင်းပြထားတာ)
storage ထဲက နေ ခုနက ဇစ်ဖြည်ထားတဲ့ folder ထဲက padauk.ttf ကို copy ကူးပါ
နောက် root ဖက်ကို ပြန်သွားပြီး system, font ထဲမှာ သွားပြီး paste လုပ်ပါ
paste (copy here) မလုပ်ခင် font folder ကို rw ကနေ ro ပြောင်းပါ
အပေါ်က ပုံလို warning ပေးလာခဲ့ရင်လည်း yes နှိပ်ပါ
ကောင်းတာကတော့ မူရင်း padauk.ttf ကို အရင် copy လုပ်ပြီး တစ်နေရာမှာ သိမ်းထားပါ၊ အဲဒါမှ နောင်တစ်ချိန် unicode ပြန်ပြောင်းချင်ရင် ပြောင်းလို့ရမှာပါ
ပြီးရင် permission ကို -rw -r -r ပြောင်းပေးရပါမယ်၊ ဒီအဆင့် အရေးကြီးပါတယ်၊ အဲဒီမှာ ပါမစ်ရှစ် မချိန်းခဲ့မိရင် boot loop တတ်လို့ပါ၊ permission ပြောင်းပေးချင်ရင် ပြောင်းချင် file (ဒီမှာတော့ padauk.ttf ပေါ့) ကို ကြာကြာ ဖိထားလိုက်ပြီးရင် ပေါ်လာတဲ့ အထဲကမှ permission ကိုရွေးပေးပါ
အောက်က ပုံလို ပေါ်လာလိမ့်မယ်၊ ဒါမှ မဟုတ်လည်း တခြား ပုံစံ လည်းဖြစ်နိုင်တယ်
အောက်က ပုံလို ချိန်းပေးတာကို -rw -r -r ပေးတာလို့ ခေါ်ပါတယ်
ပြီးရင် back key နဲ့ ပြန်ထွက်၊ ဖုန်းကို restart ချ လိုက် ပြန်တက်လာရင် ZAWGYI ဖြစ်ပါပြီ
အရေးအကြီးဆုံး အချက် permission ကို -rw -r -r ပြောင်းဖို့ မေ့ခဲ့ရင် boot loop ပတ် သွားပါလိမ့်မယ်။
KDA ထိုငျး-မွနျမာ အကွံပေးကုမ်ပဏီလီမီတကျ နှငျ့ Global future life holding Co., Ltd တို့မှ consignment (အပျကုနျ) စနဈဖွငျ့ရောငျးခြ ထားသော iNFONE
နှငျ့ F Phone မြားမှာ အမြားအားဖွငျ့ unicode စနဈ ပါပွီး ဖွဈပါတယျ၊ ထို့ အတူ AIS မှ ထုတျထားသော LAVA စီးရီး
မြားမှာလညျး Unicode စနဈ အပွီး ပါပွီး ဖွဈပါသညျ၊ အကွောငျး အမြိုးမြိုးကွောငျ့ ဇျောဂြီ ပွနျပွောငျးခငျြပါက၊ root လုပျပွီး ပွနျပွောငျးရပါတယျ၊ root လုပျရ မခကျခဲသျောလညျး၊ one click ဖွငျ့ ဇျောဂြီ သှငျးသညျ့ apk မြားဖွငျ့ အဆငျမပွပေါ၊ ရှိရငျးစှဲ ယူနီကုဒျ စာလုံးမြားပါ ပြောကျသှားခွငျး၊ english စာမြားတှငျ ? ? ? မြား ဖွဈသှားခွငျးတို့ ဖွဈတတျပါသညျ။
ယူနီကုဒျ အသုံးပွု သူလိုသူမြား အနဖွေငျ့ မညျသို့မြှ ပွုလုပျရနျမလိုအပျပဲ တိုကျရိုကျ အသုံးပွုနိုငျသျောလညျး ဇျောဂြီ အသုံးပွုလိုသူ မြား အနဖွေငျ့ ဇျောဂြီ သို့ ပွနျပွောငျးရနျလိုအပျပါတယျ၊ ထိုကဲ့သို့ ဇျောဂြီ သို့ ပွနျပွောငျးအသုံးပွု လိုသူမြား အနဖွေငျ့ old method ဖွဈသော replace font က အဆိုပါဖုနျးမြားအတှကျ ပိုမိုအဆငျပွပေါတယျ။ ၄ငျး ဖုနျးမြားတှငျ အသုံးပွုထားသော unicode font မှာ padauk.ttf ဖွဈပါတယျ၊ ထို့ကွောငျ့ ဇျောဂြီ သုံးခငျြသူမြား အနဖွေငျ့ smart zawgyi ကို padauk.ttf ဟု rename လုပျပွီး font ခြိနျး နိုငျပါတယျ၊
အပွဈမြားကတော့ ယခငျ မွနျမာ UI စာလုံးပေါငျးမြား လှဲကုနျခွငျး၊ ယူနီကုဒျ site မြားတှငျ ပေါကျကရမြားပျေါကုနျခွငျး ဖွဈသှားပွီး
အကြိုး တရားကတော့ ဇျောဂြီ (လကျရှိတှငျ အမြားဆုံးသုံးစှဲ နဆေဲဖွဈသဖွငျ့) site အတျောမြားမြား အဆငျပွပွေေ ကွညျ့ရှု နိုငျခွငျး
အဆိုး ဆုံး ဖွဈပါက ( Beginners မြားသာ) font change ရာတှငျ permission မပွောငျးမိသဖွငျ့ Boot loop ပတျခွငျး (logo တှငျ လညျနခွေငျး) တို့ပါဖွဈနျိုငျပါသညျ။
လုပျနကွေသူမြား အဖို့ တော့ အခကျအခဲ မရှိနိုငျပါသဖွငျ့ အောကျက အဆငျ့မြားကို ဖတျရနျမလိုအပျပါ၊
လိုအပျသောဖိုငျမြား ကို အောကျတှငျဒေါငျးပါ
iNFONE နှငျ့ F phone မြားအတှကျ root လုပျရနျအတှကျ vroot (iroot) ကို ဒေါငျးပါ
Ais LAVA series မြားအတှကျ Kingo root ကိုဒေါငျးပါ
Root လုပျတာကိုတော့ အသေးစိတျ မရှငျးတော့ပါဘူး၊ phone ထဲမှာပဲ root လုပျခငျြသူတှကေတော့ အောကျက download ပုံလေး နှိပျပွီး ဒေါငျးလို့ရတဲ့ အထဲက king root နဲ့ ဖွဈဖွဈ rommaster (iroot apk) နဲ့ ဖွဈဖွဈ လုပျလို့ရပါတယျ၊
root လုပျပွီးပါက root explore ကို သှငျးပါ၊
ဒေါငျးထားတဲ့ file ကို zip ဖွညျပွီး ရလာတဲ့ folder ကို sd ကဒျထဲ ထညျ့ထားပါ
ပွီးရငျ root explore ကို ဖှငျ့ပါ (အနီ ဝိုငျးပွထားတာ)
storage ထဲက နေ ခုနက ဇဈဖွညျထားတဲ့ folder ထဲက padauk.ttf ကို copy ကူးပါ
နောကျ root ဖကျကို ပွနျသှားပွီး system, font ထဲမှာ သှားပွီး paste လုပျပါ
paste (copy here) မလုပျခငျ font folder ကို rw ကနေ ro ပွောငျးပါ
အပျေါက ပုံလို warning ပေးလာခဲ့ရငျလညျး yes နှိပျပါ
ကောငျးတာကတော့ မူရငျး padauk.ttf ကို အရငျ copy လုပျပွီး တဈနရောမှာ သိမျးထားပါ၊ အဲဒါမှ နောငျတဈခြိနျ unicode ပွနျပွောငျးခငျြရငျ ပွောငျးလို့ရမှာပါ
ပွီးရငျ permission ကို -rw -r -r ပွောငျးပေးရပါမယျ၊ ဒီအဆငျ့ အရေးကွီးပါတယျ၊ အဲဒီမှာ ပါမဈရှဈ မခြိနျးခဲ့မိရငျ boot loop တတျလို့ပါ၊ permission ပွောငျးပေးခငျြရငျ ပွောငျးခငျြ file (ဒီမှာတော့ padauk.ttf ပေါ့) ကို ကွာကွာ ဖိထားလိုကျပွီးရငျ ပျေါလာတဲ့ အထဲကမှ permission ကိုရှေးပေးပါ
အောကျက ပုံလို ပျေါလာလိမျ့မယျ၊ ဒါမှ မဟုတျလညျး တခွား ပုံစံ လညျးဖွဈနိုငျတယျ
အောကျက ပုံလို ခြိနျးပေးတာကို -rw -r -r ပေးတာလို့ ချေါပါတယျ
ပွီးရငျ back key နဲ့ ပွနျထှကျ၊ ဖုနျးကို restart ခြ လိုကျ ပွနျတကျလာရငျ ZAWGYI ဖွဈပါပွီ
အရေးအကွီးဆုံး အခကျြ permission ကို -rw -r -r ပွောငျးဖို့ မခေဲ့ရငျ boot loop ပတျ သှားပါလိမျ့မယျ။
Posted by စိုင်း ခမ်းခေါင် at 9:35 PM
Labels: Andriod, Myanmar Font
Thai နိုင်ငံ အတွက်ထုတ်ထားသော iNFONE, F phone, ais ...